Zavakanto Thailande ~ Journey-Assist - Famerenana feno ...
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Fandraharahana Thailand
Fampidinana MAP mahaliana sy ny torapasik'i Thailand
Ny Nosy Thailand
Phuket no toerana faharoa be mpitia indrindra any Thailand (amin'io lafiny io ihany, ka faharoa ihany no any Pattaya). Ity dia nosy ao atsimon'ny firenena, manana endrika oval izay misy 2km ny halavany ary 48 km. Phuket no lehibe indrindra amin'ireo nosin'i Thailand. Mifamatotra amin'ny tanibe izy io amin'ny tohatra izay ananganana ny làlambe. Ao amin'ity nosy ity dia misy seranam-piaramanidina manompo sidina ao Thailand, ary koa amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina - Malaysia, Singapore, Hong Kong, Indonezia.
Ny mpankafy ny hetsika ivelan'ny any Phuket dia afaka mahita golf golf, safaris ao amin'ny faritra akaiky indrindra ao an-tanànan'i Thailand izay misy fantsakan-drano sy onjam-peo elefanta any anaty ala. Ilay dia mandeha an-dranomasina avy any Phuket mankany amin'ireo nosy akaikin'i Thai ary ny tanibe dia tena malaza. Ny toerana misy ny mpizahatany any Phuket dia misy ny torapasika marobe, izay mitsidika mpizahatany an'arivony isan-taona.
Ireo torapasika eto dia fasika madio sy rano madio. Mahery kokoa ny rivotra iainana raha ampitahaina amin'i Pattaya. Phuket koa dia manana hotely maro be any amin'ny toerana mangina. Ao amin'ny faritr'i Laguna Beach dia misy trano fandraisam-bahiny mihoa-pampana ihany. Na dia mihoatra ny haavon'ny vidiny ao Pattaya aza ny haavon'ny vidin'ny hotely ao Phuket, azo atao tsara ny mahita toekarena ary amin'ny fotoana iray ihany, azo atao tsara ny safidy eto amin'ity nosy ity.
Ny torapasika tsara indrindra any Phuket (hevitra, sary, horonan-tsary, hevitra)
Phuket dia tsy midika mihitsy hoe nosy kely misy toerana mahafinaritra. Eto dia afaka mahita zavatra tokony hatao foana ianao. Ao Phuket, misy endrika manintona ny natiora, toy ny fantsona, ny riandrano, ny tendrombohitra, ny ala virijina, ary ny tsangambato kolontsaina - ny tranombakoka sy ny tempoly. Afaka mahita zavatra mahaliana ho an'ny tenany ny tsirairay. Ny zavatra iray dia tsy mahafinaritra: be loatra ny fijery eto amin'ity nosy ity, ka ny fitrandrahana azy rehetra dia mila fotoana be.
Na dia iray amin'ireo toeran-tsena lafo vidy indrindra any Thailandy i Phuket, dia manamarina izany ny tahan'ny vidiny toy izany. Ny fialan-tsasatra eto dia mbola mora lavitra noho ny any amin'ny fivahinianan'i Eropa. Ny tombony lehibe amin'ny Phuket dia saika ny mpizahatany rehetra eto dia manana fahafahana hisafidy ho azy ireo safidy mety ho vitanao amin'ny tetibolao. Rehefa dinihina tokoa, dia misy trano fandraisam-bahiny, ary trano tsara tarehy miaraka amin'ny dobo tsy miankina, ary trano fandraisam-bahiny kely akaikin'ny tora-pasika.
Mahaliana ao Phuket (hevitra, sary, horonantsary, hevitra)
° ° RџR S, S, R R№SЏ â € "RїRѕRїSѓR" SЏSЂRЅRμR№S € RoR№ Rohr · RєSѓSЂRѕSЂS, RѕRІ RјR S, RμSЂRoRєRѕRІRѕR№ ° C ‡ R ° SЃS, Ro RўR Rohr ° "° P ° RЅRґR. Р РЃ ° ° ° ° ° ° »»ЏЏЏЏЏ Џ »є» »» »» »» »ЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏ Џ‚Џ »» »» »» »»Џ» »ЏЏЏЏЏЏ Џ‚є »» »» »»Џ »Џ» »ЏЏ »ЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏЏ Џ‚є »» »» »» »» »» »» »»ЏЏЏЏ Ѕ‚ѕѕ ° ° ° ° °..... .‚ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Ќќ ° ° ° ·ЅЅ ° · · · · їїї ° °ВїїїїїїїЅЅЅЅЅЅїЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅ ЅВї °ЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅЅ Tsia. Ґ‚ѓѓ‚‚‚ ‚Ѕґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґ
Misy trano fandraisam-bahiny 120 mahery ao Pattaya, manomboka amin'ny tena lamaody, miafara amin'ny trano fandraisam-bahiny tsy dia lafo. Ilay tanàna dia malaza amin'ny toeram-pisakafoanana isan-karazany izay manome tsy ny Thai ihany fa ny Alemanina, frantsay, Japoney, Italiana, sinoa nahandro. Mivoatra be ny indostrian'ny fialam-boly eto, noho ny tontolo iainana mahafinaritra sy mahafinaritra. Ireo tora-pasika lehibe misy hetsika hafa samihafa dia afaka mampifaly ny rehetra.
Ny tombotsoan'i Pattaya dia misy ny toerany voajanahary: toetrandro mafana nefa tsy be loatra miaraka amin'ny fio-dranomasina vaovao ary ny rivotra manitra dia misy fofona manitra. Ankoatr'izay, Pattaya dia iray amin'ireo ivarotra varotra tsara indrindra any Thailand. Karazam-barotra sy toeram-pivarotana isan-karazany (izay tena mifantoka any atsimon'ny tanàna) dia manolotra karazana firavaka, souvenir, vokatra landy. Ny fananganana mpivarotra dia miasa mandra-tara. Mahavariana ny fikorontanana akanjo, hoso-doko ary vokatra vita amin'ny hazo.
Buddha Hills sy Khao Phra Tam Nak
Рћћєє ° ° ° ° ° ° ° ° "" "" ""џ" Рџѕѕґґ ‹І ‹‹ ‹‹ "
Hotely Zign Beach sy Wong Prachan
Рџџ »ЏЏЏЏ °ЏєЏЏЏЏЏЏ “љљљЏЏЏ
Tranombakoka Subak Rice any Bali. Indonezia
20.09.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Museum Museum of Subak Rice any Bali. Indonezia tsy misy
Museum an'i Puri Lukisan any Bali. Indonezia
20.09.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Museum Puri Lukisan any Bali. Indonezia tsy misy
Museum momba ny zavakanto Neka any Bali. Indonezia
19.09.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny Neka Art Museum any Bali. Indonezia tsy misy
Museum an'i Kerta Gos any Bali. Indonezia
19.09.2020 / fanehoan-kevitra fandraisam-peo Kertos Museum ao Bali. Indonezia tsy misy
Museum Museum Antonio Blanco any Bali. Indonezia
18.09.2020 / 1 Comment fandraketana ny Museum Antonio Blanco any Bali. Indonezia
Ala Monkey Sange any Bali. Indonezia
18.09.2020 / Fanehoankevitra 2 ao amin'ny Ala Monkey Sange any Bali. Indonezia
Lapan'ny mpanjaka Ubud, Bali, Indonezia
15.09.2020 / Fanehoankevitra 4 ao amin'ny Royal Palace Ubud, Bali, Indonesia
Fambolena kafe Satria, Bali, Indonezia
15.09.2020 / Fanehoankevitra 4 ao amin'ny Plantation Coffee Satria, Bali, Indonezia
Ala Monina Alas Kedaton, Bali, Indonezia
14.09.2020 / Fanehoankevitra 2 ao amin'ny Monkey Forest Alas Kedaton, Bali, Indonesia
Alika rajako any Ubud, Bali, Indonezia
14.09.2020 / 1 Comment amin'ny ala Monkey any Ubud, Bali, Indonezia
Havoana miafina Beji Guwang, Bali, Indonezia
14.09.2020 / 1 Comment ao amin'ny Hidden Canyon Beji Guwang, Bali, Indonezia
Hotely Bedugul Taman, Bali, Indonezia nilaozana
12.09.2020 / Fanehoankevitra 3 ao amin'ny trano fandraisam-bahiny nilaozana Bedugul Taman, Bali, Indonezia
Toeram-panorenan'i Yeh Pulu, Bali, Indonezia
12.09.2020 / fanehoan-kevitra ao amin'ny complexe arkitekina Yeh Pulu, Bali, Indonesia tsy misy
Zoo Bali, Indonezia
12.09.2020 / Fanehoankevitra 2 eny ivelan'ny Zoo any Bali, Indonezia
Tanàna Amlapura, Bali, Indonezia
11.09.2020 / 1 Comment ao amin'ny tanànan'i Amlapura, Bali, Indonezia
Vohitra Batubulan, Bali. Indonezia. fiantsenana
11.09.2020 / fanehoan-kevitra firaketana ny tanàna Batubulan, Bali. Indonezia. fiantsenana tsy misy
Fisoratana anarana ao amin'ny tranonkala Journey-assist.com